१५१ किलोको माला लगाएर देउवाले भने - 'कांग्रेस कोइरालाका छोरा-नातिको होइन' - Namaste Times
सोमबार, जेठ ०६, २०७६ | Thursday, February 21, 2019
१५१ किलोको माला लगाएर देउवाले भने – ‘कांग्रेस कोइरालाका छोरा-नातिको होइन’
प्रकाशित मिति: बिहिबार, फाल्गुण ०९, २०७५ समय: ९:३६:५१
काठमाडौं – गत शनिबार गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउन्डेसनले वीरगन्जमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा डा. शशांक, डा. शेखर र सुजाता कोइरालाले १२१ किलोको एउटै माला पहिरिएर आफूहरू एकताबद्ध रहेको सन्देश दिएका थिए । ‘भाषण गरेर मात्र पार्टी चल्दैन, काम गर्नुपर्छ अनि मात्र नेता बन्न सकिन्छ, हामी तीन कोइराला एक छौँ, भन्नेले त नमिलेको भन्छन्, तर अरूले टाउको नदुखाए हुन्छ,’ वीरगन्जको कार्यक्रममा सुजाताले भनेकी थिइन् ।
हाम्रो टाउको फुट्दा कहाँ थिए उनीहरू ? : देउवा
चार दिनपछि बुधबार वीरगन्ज नै पुगेर सभापति देउवाले कोइरालाहरूप्रति आक्रोश पोखेका हुन् । बुधबार बिहान बारामा १५१ किलोको मालासहित सम्मान ग्रहण गरेर देउवा वीरगन्ज पुगेका थिए । ६९औँ प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा जिल्लास्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै देउवाले भने, ‘चुनावमा जित–हार हुनु स्वाभाविक हो । ०५१ सालमा हामी पनि हारेका हौँ । ०६४ मा पनि हार्‍यौं । अस्तिपल्ट (०७४) पनि हार्‍यौं । हार्नु ठूलो कुरो होइन । ठूलो कुरो त पार्टीभित्रको अनुशासनहीनता हो । कुनै पनि पार्टीमा अनुशासन छैन भने त्यो पार्टीको भविष्य नै छैन । कांग्रेसमा अनुशासनहीनता बढेको छ । अब अनुशासन समिति गठन गरेर छानबिन गर्छु । अन्तर्घाती र अनुशासनहीन नेतालाई कारबाही गर्छु ।’
देउवाले कोइराला परिवारप्रति आक्रोश पनि व्यक्त गरे, ‘शेखर कोइराला बढी बोल्दै हिँडेको छ । कोइराला भन्दैमा पाइन्छ ? हामी जेल पर्दा, हामीले आन्दोलन गर्दा, हाम्रो टाउको फुट्दा कहाँ थिए उनीहरू ? यो पार्टीमा कोइराला भन्दैमा पाइन्छ ? कांग्रेस जनताको पार्टी हो, नेपाली जनताका छोराछोरीको पार्टी हो । कोइरालाका छोरा–नातिको होइन । केही गरेको छैन, कुनै योगदान छैन, अनि मेरो भन्दैमा पाइन्छ ? बढ्ता बोल्ने ?’
प्रधानमन्त्री पनि के कम ? डोटीमा ५१ किलोको माला पहिरिएर भने–यो इतिहासकै उत्कृष्ट सरकार
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मंगलबार डोटीको बिपीनगरमा ५१ किलोको माला लगाए । माला पहिरिँदै उनले मुस्कानसाथ हात उठाएर फोटो खिच्न पोज दिए । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट पनि मालाभित्र गोलबद्ध भए । अमरगढी नगरपालिका–१ दुधकाँडेमा १३२ केभी क्षमताको सबस्टेसन उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्री त्यहाँ पुगेका थिए । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
प्रधानमन्त्रीले सरकार अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट भएको दाबीसमेत गरे । सरकार गठनको एक वर्षमा धेरै काम भएको, आफ्नै पानीजहाज सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले पानीजहाज कार्यालय स्थापना गरिसकेको र पूर्व–पश्चिम रेल आफ्नै सरकारका पालामा हुने दाबी गरे ।